Dacwad dib loo dhigey Muqdisho
20 Feb 20, 2013 - 7:35:30 AM
Maxkamada Rafcaanka gobolka Banaadir ayaa dib u dhigtey maanta 20 February,2013 Dacwada Wariye Cabdicasiis Koronto iyo haweeney sheegtey in ciidanka DF Somalia ay kufsadeen oo horey xukun mid hal sanno ah loogu ridey.
Cabdicasiis ayaa la xirey horey oo lagu soo oogey danbiga been abuur inuu ka sameystey DF Somalia ka dib markii uu wareystey Haweeney sheegtey in ciidanka DF Somalia kufsadeen.
Maxakamdeyntan ayaa abuurtey buuq iyo muran xoogan laga soo bilaabo Wakaaladaha dunida u dooda Xuquuqda Aadanaha iyo guud ahaan dadweynaha Soomaliyeed.
Subaxnimadii hore ayuu sheegey Qareenka Koronto u doodaya inuu ku rajo waynyahay siideynta labadan Ruux kadib marka loo fariisto Rafcaanka ka hor intaan todobaadyada soo socda dib loo dhigin.
Xukuumadda DF Somalia ayaa horey looga dalbaday inay soo farogeliyaan Xukunkan oo ay sheegen Madaxweynaha iyo Wasiirka koowaadba inaysan xaq u lahayn farogelinta Nidaamka Garsoorka uuna ka madax banaanyahay.
Marar badan ayaa laga soo sheegey Ciidanka Amaanka Koonfurta Somalia inay tacadiyo u geesteen Dadweynaha,inkastoo DF ay balanqaadey inay wax ka qabaneyso haddana Wakaaladaha Xuquuqda Aadanaha u dooda ayaa aaminsan in weli talaabo cad aysan qaadin DF Somalia.